IIPATENI ZOMGANGATHO WOMTHI (UBEKO KUNYE NESIKHOKELO SOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iipateni zoMgangatho woMthi (Ubeko kunye nesikhokelo soYilo)
Kwesi sikhokelo kwiipateni zomthi esabelana ngazo ezona ntlobo zaziwayo zomgangatho womthi kunye noyilo lweeprojekthi zakho zasekhaya. Imigangatho yeplanga yeyakudala kwaye ithandwa ngezizathu ezifanelekileyo. Zomelele, zinomtsalane, kwaye zinokwenziwa ngentando ephezulu. Uyilo lobungcali kunye noncedo lofakelo luya kwenza uhlaziyo lwakho okanye ulwakhiwo olutsha lube nomoya, kodwa kukho indleko ebandakanyekayo.
Ukuba uqinisekile ngezakhono zakho ze-DIY kwaye unezinye izixhobo ezisisiseko, kunokwenzeka ukuba ufake owakho umgangatho wepateni yomthi.
Nokuba yeyiphi indlela okhetha ukuyithatha, uya kuzuza ngokwazi ngakumbi malunga nezinto, ukufakelwa, ukugcinwa, kunye neepatheni onokukhetha kuzo.
Uyilo lwePateni yomthi
Iipateni zoMgangatho woMthi
Umzekelo weHeringbone kumgangatho wokhuni
Ipateni yomgangatho weHeringbone ephindwe kabini
Umgangatho wePatheni yePatron
IVersailles yePateni yoMgangatho woMthi
Iipateni zoMgangatho omileyo
Ipeyinti yoMgangatho weBhasikithi ephothiweyo
Umzekelo weStack Bond
Iphethini yeBhodi yokuKhangela
Umzekelo woMgangatho kaMoses
Umda othe tyaba
Umxube wobubanzi obudibeneyo
Iipateni zePlay Inlay
Kwizinto zokuyilwa kwepateni yezinto, kukho izinto ezimbini onokukhetha kuzo - iinkuni eziqinileyo okanye eziyinjini.
Imigangatho eqinileyo yomthi, njengoko igama libonisa, zakhiwe ngeeplanga zokhuni lokwenyani. Iinjini zobunjineli zinokusebenzisa iinkuni zokwenyani, kodwa ngumaleko ocekeceke kakhulu onamathele kwisiseko seplywood okanye i-HDF (ifibreboard ephezulu).
Xa kuziwa kwiindlela zokufaka, kukho imigaqo ekufuneka uyazi. Eyokuqala yi 'subfloor'. Xa kwakhiwa ikhaya lakho, iijoists zangena kuqala. Le yimicu emide yomthi eya kuthi ixhase umphezulu osapho lwakho luhamba kuwo.
Umgangatho ongezantsi ugubungela ezo zidibanisi kunye nezikhewu phakathi kwazo, ukubonelela ngendawo ethe tyaba oza kuhamba kuyo njengoko indlu iyakhiwa. Ngokwesiqhelo, i-subfloor yenziwe ngeplywood.
Xa kufika ixesha lokugqiba ukwakhiwa, kufuneka kwenziwe ukhetho malunga nokuba uluhlobo luni lomgangatho oza kuwufaka. Umgangatho we-glue-down okanye we-nail-down uqhotyoshelwe ngqo kwi-subfloor.
Iglu okanye iinzipho zibambe umgangatho ngokuqinileyo kumgangatho ongaphantsi, osusa nasiphi na isithuba okanye indawo yomoya. Olu hlobo lofakelo luqhelekile kwimigangatho eqinileyo yomthi.
Umgangatho odadayo lolunye ukhetho. Imigangatho yokudada ayiqhotyoshelwanga kwaphela kumgangatho ongezantsi. Kukho umqamelo womoya phakathi komgangatho kunye nomgangatho ongaphantsi, onokwenza ukuba kube lula ukuhamba kuwo.
Nangona kunjalo, eli nqaku linye linokutshintsha i-acoustics yomgangatho kunye negumbi, njengoko isandi siphinda sihamba kwisithuba esingenanto. Amanyathelo anokuvakala ngokungaphezulu, kwaye isandi sinokubhabha sijikeleze kwigumbi elinomgangatho odadayo.
Nawuphi na umthi uya kuphendula kubumanzi, ukwandisa ngexesha lokufuma okuphezulu kunye nokungena xa kukho amanzi amancinci emoyeni. Kwiindawo ezinemozulu epholileyo, oku akubonisi ngxaki nokuba kungakanani ukudada okanye imigangatho eqinileyo yomthi.
Apho kukho ukufuma okuphezulu kakhulu, umgangatho odadayo awulungelanga, kuba ukufuma kungabambeka phakathi komgangatho kunye nomgangatho ongaphantsi, okubeka emngciphekweni wokubumba nokungunda.
Kuba imigangatho edadayo ixhomekeke kuxinzelelo lokuyigcina endaweni endaweni yehardware okanye yokuncamathelisa, basemngciphekweni omkhulu wokulwa kunemigangatho eqinileyo yomthi.
Imigangatho yokudada ngokwakhiwa ngokubanzi ukusuka kumgangatho wokucofa odityanisiweyo, okwabizwa ngokuba kukucofa okanye ukutshixa ngokudibeneyo. Umgangatho okhuni wokucofa okhiyekayo womthi uyafumaneka, kodwa awuxhaphakanga kuneenguqulelo zemveliso.
Umgangatho wokudibanisa kunye nenkqubo yolwimi kunye ne-groove esikwe kumacala eplanga ngalinye, ebavumela ukuba banxibelelane kwaye basuse nasiphi na isithuba phakathi kweebhodi zomgangatho. Uxinzelelo kunye namandla ale ndawo yokudibanisa yiyo ebamba umgangatho wakho kunye.
Kuyenzeka ukuba udibanise kwaye utshatise ubude obahlukeneyo, ububanzi, kunye nezitayile zokucofa kunye kunye nokwakha umgangatho wokhetho lwakho.
Nangona kunjalo, ukuhambelana kunokuba ngumcimbi. Abavelisi abahlukeneyo banokusebenzisa unxibelelwano olwahlukileyo okwahlukileyo, ke kuyacetyiswa ngokubanzi ukuba ubambelele kumthengisi omnye kuzo zonke iimfuno zeprojekthi yakho yomgangatho.
Nokuba iimveliso ezahlukeneyo zisuka kumgca omnye zinokuba neemfuno ezahlukeneyo zokufaka, ke unokufuna ukukhangela ubuchwephesha bofakelo lwakho lwasekhaya, okanye uthethe nomthengisi kwigumbi lokubonisa lomgangatho wakho ngaphambi kokuthenga kwakho okokugqibela.
Ewe unokufumana ukubonakala komthi ngaphandle kokusebenzisa iinkuni konke konke. Umgangatho weVinyl Kwaye ukutyibilika komgangatho weplate kuye kwafika ithuba elide okoko waziswa kwimarike, kwaye unokuthembela ngokuthe ngqo kwinkangeleko yomthi wokwenyani.
Ayizukuziva ngokuchanekileyo phantsi kweenyawo, kwaye iihound zoyilo ziya kuba nakho ukuxela ukuba ayizomthi wenene, kodwa iyathandeka kwaye ixhaphake kakhulu.
Ukugcinwa kwexabiso kunye nokulula kofakelo kwenza i-vinyl okanye i-laminate ukhetho olunomtsalane ekufezekiseni umthi, okanye ubuncinci obunjengomthi, kumgangatho wepateni.
Imigangatho ye-Vinyl okanye ye-laminate ayinakho ukugqitywa. Iinjini zobunjineli zinomaleko obhityileyo womthi onzima phezulu, obizwa ngokuba yi ‘veneer’. Kungenzeka ukuba uyiphucule le veneer kwezinye iimveliso, ngelixa ezinye zingenakubekwa phantsi kwaye zicokiswe.
Yomelele Umgangatho wokhuni oluqinileyo inokwenzeka ukuba ihlale ixesha elide ngaphandle kokufuna enye endaweni yokuba inokubekwa phantsi entlabathini kwaye icokiswe kaninzi.
Xa izinto zomgangatho wakho zichongiwe, lixesha lokuba ujonge ipateni yomgangatho. Ipateni yomgangatho ibhekisa kwindlela ekubekwe ngayo iinkuni.
Ukusuka kwiiplanga ezilula ezithe nkqo ukuya kwimingxunya entsonkothileyo, kwiipateni eziphefumlelwe ngookumkani baseFrance, kukho into eza kulungela yonke incasa, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nesitayile sasekhaya. Ezinye zeepateni zomgangatho oqhelekileyo zichazwe apha ngezantsi.
Enye yeepateni ezilula ukufezekisa, umgangatho weplanga othe ngqo uyathandwa kwaye kulula ukufaka ukhetho lwe-DIY. Kule patheni, kubekwe iiplanga ezithe tyaba ezinde ecaleni kwenye.
Ukuba usebenzisa imigangatho eqinileyo yomthi, ezi zibethelelwa okanye zincanyathiselwe kumgangatho ongezantsi. Ukuba usebenzisa isisombululo esenziwe ngobunjineli, njengokucofa kunye ngokudibanisa i-flooring, akukho sidingo sokuyikhusela kwi-subfloor.
Imigangatho yeplanga ethe ngqo ethembekileyo lukhetho olukhethiweyo kubafakeli bexesha lokuqala. Iindidi ezininzi ze ulwimi kunye ne-grove yaphantsi sebenzisa iphethini yokubeka ngokuthe tye njengoko zilungelelana ngokukhawuleza kwinkqubo elula yokufaka.
Kwiphatheni yedayagonal yomgangatho womthi, iibhodi zomgangatho zonke zihamba kwicala elinye kodwa zibekwe engile ezindongeni.
Iibhodi ezinde kakhulu ziya kolulwa zide zithe nkqo kwigumbi, ukusuka kwikona ukuya kwikona. Iiplanga zisikiwe zincinci kwaye zincinci ubude ukuzalisa iikona ezimbini ezisele.
Ifanelekile i-DIYer ethembekileyo, imigangatho yeplanga edizayiniweyo efuna ukusikwa okungaphezulu kuneepateni ezichanekileyo. Uyakufuna kwakhona ukusika okudibeneyo apho iibhodi zomgangatho zihlangana khona neendonga.
Imigangatho eyenziwe ngomthi efanisiweyo ifuna ukucwangciswa ngononophelo ukuphepha ukumosha izinto. Cinga ukuba isicwangciso sakho sokusika siqwalaselwe ngumfakeli onamava, ukuba uyazi enye, okanye ngcono okwangoku, uqeshe lo msebenzi.
I-Herringbone yipateni eyaziwayo kuyo yonke into ukusuka kwiziketi ezinamaqhina ukuya kwizikhuselo ze-duvet kwiindonga ezipeyintiweyo, ewe, konke kwaqala ngemigangatho yomthi.
Ebizwa ngokubonakala kwayo okufanayo kumathambo e-herring, i-herringbone-patterned patterned floor yipatheni ephindayo eyenziwe ngeebhodi ezibekwe kwii-angles ezingama-90.
Umtya ngamnye weenkuni ugawulwa ubungakanani obufanayo, ngesiqhelo malunga nee-intshi ezilishumi elinesibhozo. Imicu yeenkuni ngoxande.
Ukuqala iphethini, icala elifutshane leplanga lokuqala libekwe lichukumisa isiphelo selinye ukhuni, ecaleni kwecandelo lesibini lomthi elide. Oku kudala i-V. Isiphelo esifutshane sesiqwengana somthi sibekwe ngendlela efanayo nesokuqala, njalo njalo.
Isiphumo soku kukuba kweeplanga ezinde ezenziwe ngamafutshane, iziqwenga ezidayalanayo. Kukho ukuma kwe-zigzag emileyo kumgangatho wonke.
Le ndlela yenye yeepateni ezindala kumgangatho wokhuni, kwaye ngenxa yoko, lukhetho olukhulu kumakhaya anezinto zemveli okanye ezembali zokwakha.
iqhina elimnyama ngokuzithandela kubafazi
Ipateni yomgangatho weherringbone ephindwe kabini isebenzisa iiplanga ezimbini ezibekwe ecaleni ukwenza uyilo loyilo kunokuba lube lunye.
Le patheni idala indawo engaphezulu ngokuzoba iliso kwi-V ngaphakathi koyilo. Le patheni ihlala isetyenziselwa uyilo lwegumbi elincinci ukunceda ukwandisa ubungakanani bayo.
Umgangatho wokhuni ongumzekelo we-chevron unokucingelwa njengowokuhlaziywa, umzala wangoku wepatheni yeherringbone. Isebenzisa ubuchwephesha obufanayo, ngaphandle kokuba kusikwe iziqwenga zomthi ezenza iiplanga ezinkulu zibe ngoxande, zinqunqwe kwiiparalelogram.
Oku kususa uphawu lwe-zigzag lwe-herringbones kunye nokubonelela ngokucoceka kweebhodi eziza kunye kwii-angles ezingama-45.
Iya kufuna ubuchwephesha ngakumbi ekusikeni, ke kwakhona, ulumkiso luyafuneka ukunqanda ukumosha izinto. Le patheni ilungele kakhulu i-DIYers enamava okanye abafaki bobuchwephesha.
Ibhotwe laseVersailles laziwa ngokwakhiwa kunye noyilo. Enye yezona ndawo zokuhlala zasebukhosini zibalaseleyo zakha zenziwa, zonke iinkcukacha zazenzelwe ukuzukisa ulawulo lukaLouis XIV owayeyile. Intle ngobuhle, olu luyilo lushiyeke kakuhle kubafakeli beengcali.
Uyilo luqulathe uthotho lwezikwere, kakhulu njengepatchwork quilt. Isikwere ngasinye silinganisa malunga neenyawo ezintathu ngeenyawo ezintathu kwaye sinomda ongaphandle owenziwe ziingceba ezi-4 zomthi.
Ngaphakathi komda, i-criss-cross, i-lattice, okanye ipateni ephothiweyo ifezekiswa ngemicu yoxande yomthi, ebekwe idiagonal ukuya emideni. Izithuba ezingenanto zizaliswe ziingceba zomthi.
Kule patheni, zonke iiplanga ziyalingana ngobubanzi, kodwa zisikwe kubude obuqhelekileyo obuqhelekileyo. Umqolo omnye weplanga usebenzisa iiplanga ezinde, kwaye olandelayo usebenzisa iiplanga ezimfutshane.
Isiphumo somgangatho weenkuni odibeneyo ojongeka ngokungacwangciswanga, kunokuba ube yingozi.
Imigangatho eyenziwe ngeplasketi eyenziwe ngomthi yenziwa ngokusika ngononophelo kwaye ubeka iinkuni eziziingxande kwipateni yokwahlula.
Indlela ezibekwe ngayo yenza ukuba kubonakale ngathi kukho into eyenziwe ngomthi ehamba phantsi kwenye, ngokufanayo nendlela ezisetyenziswa ngayo iintsinga xa kusenziwa iibhaskithi.
Apho kuya kubakho izithuba phakathi kwemicu yebhaskiti, isikhewu sigcwaliswe ngamatye aqingqiweyo.
Iipateni zebhasikithi zithatha enye yezona zinto zinomtsalane kwiipateni zeVersailles, i-lattice okanye iphethini ephothiweyo, kodwa endaweni yokuyiqhekeza kwizikwere ezinemida, iphethini iyaphinda nje, igubungela wonke umgangatho.
Ngelixa isiphumo sokubonakalayo silula kunomgangatho wokhuni weVersailles, ufakelo lunokufuneka ngakumbi kwezobuchwephesha. Ngesi sizathu, kucetyiswa ukufakelwa kobuchwephesha kumgangatho weplanga lomgangatho webhasikiti.
Ukongeza kwipatheni yomgangatho webhasikidi yokuluka rhoqo kabini inika iplank eyongezelelweyo kuyilo lokuluka lwepateni.
Olu hlobo lwepateni luyamamela emva kwexesha le-1920 apho ubeko lweebhasikithi zokuluka zazisetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zoyilo lwangaphakathi. Ke ngoko kunokuba bhetele ukuba isetyenziselwe abo bafuna isitayile esingaphezulu sendalo yoyilo lwangaphakathi
Igama lithi konke - iinkuni zigawulwa zibe ngoxande ubukhulu bezitena, ezilungiswa emgangathweni ngendlela efanayo nodonga lwezitena.
Kuqala kubekwe umqolo wezitena. Umqolo wesibini ugxadazelwe ukuze embindini wesitena ngasinye ungaphezulu komthungo owenziwe zizitena ezantsi kwawo. Le yipateni entle yomgangatho woqalo, okanye nawuphina umntu oneenqwelwana zomthi anokusebenza nazo.
Ipateni yomgangatho wokubopha ungasetyenziselwa ukufumana ukujonga okwangoku kuyilo lwangaphakathi. Ubume beempawu zamaplanga abekwe kumgca othe ngqo afakwe ngokuthe tye ngaphezulu kwelinye kwipateni yegridi.
Ipatheni yesixokelelwano sesitokhwe ihlala isetyenziswa ekhitshini ebuyela umva kwindawo yokuhlambela nakwindawo zorhwebo. Enye yeendlela ezilula zeepateni kwaye ngenxa yoko ithandwa kakhulu.
Ibhodi yokutshekisha ekwabizwa ngokuba 'yingobozi yesikwere,' yiphatheni eyayidume kakhulu ngeminyaka yee-1970, kwaye ke inokubonakala ngathi yomhla omncinci. Iithayile zesikwere ezincinci zenziwe ngokudibanisa uxande lomthi.
Ezi tile zibekwe kwipateni yokutshintsha - kuqala ngokuthe tyaba, emva koko zime nkqo-ukwenza ibhaskiti yesikwere okanye ipateni yebhodi yokujonga kumgangatho wakho.
Ipateni yomgangatho womculo unokuba neendlela ezininzi ezahlukeneyo. Ngokwesiko kuboniswe kwigalizi yobukhulu obahlukeneyo okanye iithayile zodongwe ezazicwangciswe kunye ukwenza imifanekiso okanye iipateni.
Ukulungelelanisa iipateni ezininzi ziwela phantsi kwegama elithi mosaic. Ezi zihlala zisetyenziswa njengendawo yokubamba yomthi eyenza izinto ezinomdla zoyilo ngaphakathi koyilo oluqhelekileyo lomgangatho.
Le patheni yiyantlukwano kumgangatho wokhuni othe ngqo. Xa zibekwe ngokuthe tye, intsingiselo ehambelana nodonga olude kakhulu lwegumbi, iiplanga ezilinganayo ngokulinganayo ziya kubonelela ngengqondo yendawo enkulu, ende.
Iipateni ekuxoxwe ngazo ukuza kuthi ga ngoku ziye zaphawuleka ekubeni zonke zisebenzisa iiplanga ezisikwe kububanzi obufanayo. Ipateni yobubanzi obuxubileyo ifanelekile kumgangatho othe ngqo okanye odibeneyo.
Olu luyilo lusebenzisa iiplani ezahlukileyo ububanzi - ezinye zibanzi kwaye zincinci, ukufezekisa ukujonga okungafaniyo.
Eyona ndawo ifaneleke kakhulu kwizithuba ezinomnatha wokuhonjiswa kwe-rustic, le pateni ibonakala intle kwizindlu zasefama okanye xa zenziwe kwindawo yokugcina iinkuni kwakhona.
Mhlawumbi eyona nto ibiza kakhulu, inzima ngokobuchwephesha, kwaye iyamangalisa nakweyiphi na ipateni yomgangatho, inlay yeplanga iyenziwa ngokwezifiso kakhulu. Imibala eyahlukeneyo yeenkuni isiko elisikiweyo kwaye libekwe ngononophelo ukwenza iipateni ezintsonkothileyo.
Ukufakwa kwokhuni kuyafana nemosisi kuba isebenzisa iziqwenga ezincinci ukwenza uyilo olukhulu, kodwa endaweni yethayile, kusetyenziswa ukhuni.
Umchweli oyingcibi unokuyila inlay yomthi ngakumbi kwisithuba sakho. Kukho neepateni eziqhelekileyo onokukhetha kuzo. Eyona nto intsonkothe ​​ngakumbi, kulindeleke ngakumbi ukuba uhlawule uyilo kunye nofakelo.
Imigangatho yokufaka iinkuni ihlala isebenzisa iinkuni ezizodwa ukufezekisa umahluko, onokongeza kwiindleko zomgangatho wakho weplanga. Kwakhona, lindela ukuhlawula ngakumbi izinto zokwakha, kuba kuyakubakho izinto ezilahliweyo zomthi oshiyekileyo xa kugqityiwe umgangatho wakho.
Nangona kunjalo, ukuba uhlahlo lwabiwo-mali luvumela umgangatho womgangatho wokhuni, kunokukhawuleza kube yinto oyithandayo yegumbi.
Sitshele ukuba zeziphi iipateni zakho zomthi ozithandayo kwezi zimvo zingezantsi. Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela igalari yethu iipateni zethayile .
umgca odumileyo osuka kumtshakazi oyinkosazana
ezona ndawo zokuthenga iithoyi zesini
ukubekwa kwiphepha lephepha langasese
ngaba ngu mrs okanye ms